တွက်ချက်မှုများ 50 ကျော်အမျိုးအစားများ။ အချွတ်အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုဒိုင်း၏အရွယ်အစား, သစ်သားလှေကားတွက်ချက်မှု။ တစ်ဂဏန်းတွက်စက်တည်ဆောက်ခြင်း။
ခြံစည်းရိုး, မြို့ရိုး, ကြမ်းပြင်
ငါအဆက်မပြတ်ပစ္စည်းများတည်ဆောက်ခြင်းသို့မဟုတ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဒီဇိုင်း၏အရွယ်အစားတွက်ချက်ပမာဏကို၏တွက်ချက်မှုနှငျ့ရငျဆိုငျပါ၏တစ်ဦးသည် frame အိမ်၏ဆောက်လုပ်ရေးလိုက်ရှာ။
ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အတွက်ဘုတ်အဖွဲ့, သစ်သို့မဟုတ်အခြားကျွန်းသစ်ဖြတ်တောက်ခြင်း - ရိုးကိုသို့မဟုတ်ကြမ်းပြင်များအတွက်လိုအပ်သနည်း
အပူပေးစက်စတဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်တွက်ချက်မှုလိုအပ်သည်။ ဒီသတ္တုသိုးမွေး, အမြှုပ်များသို့မဟုတ်အခြား insulator တွင်လည်းလိမ့်မည်။ အဖြစ်ငါ insulator တွင်လည်းအသုံးပြုငါ့အိမ်အရိုးစုများနှင့်လျှပ်ကာပစ္စည်းများများ၏ဒီဇိုင်း, ကြမ်းပြင်နှင့်အမိုးနှင့်နံရံများကိုသာရေးသားခဲ့၏။
အမိုးမိုး - အခြားပုံပြင်။ အဆိုပါငါ့အိမ်ရှုပ်ထွေးတဲ့ပုံစံမျိုးစုံ၏အိမ်ခေါင်မိုးများနှင့်သတ္တုအခါရေယုံများသို့မဟုတ်အခြားအမိုးမိုးပစ္စည်းပမာဏကိုတွက်ချက်ခက်ခဲသည်။ ထိုအဆဲကအမိုးမိုးအတွက်အကောင့်စွန့်ပစ်စယူရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထိုအမိုးမိုးပစ္စည်းကိုတစ်ဦးအမိုးနှင့်အတူနှစ်ပေါင်းများစွာအဘို့အိမ်တော်ကိုလည်းရှိ၏။
နောက်တစ်နေ့ရာသီရိုးကိုရင်ဆိုင်နေရပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်မိမိကိုမိမိတွင်မှ, အခိုးအငွေ့အတားအဆီးစဉ်းစား ...
ကျောင်း algebra သင်တန်းနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်တစ်ဦးကလူတစ်ဦး, အဲဒီတွက်ချက်မှုခက်ခဲလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ စာရွက်တစ်ရွက်ပြီးဂဏန်းတွက်စက်ကို ယူ. ထိုဖော်မြူလာသတိရ, ကြိမ်၏စုံတွဲတစ်တွဲစစျဆေး ... ထိုအစစ်ဆေး ... အမှားကိုရှောင်ရှားဖို့တွက်ချက်မှုအတွက်မလိုအပ်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်စရာတွေတိတ်ဆိတ်စွာ။ သငျသညျအလုပျဖို့လွယ်ကူလွန်းအပေါ်ပိုပြီးဝယ်ဖို့တစ်ခုခု, ဒါမှမဟုတ်အပြန်အလှန်, ရှိပါကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်, ဒီတော့အပေါ်အလွန်ကောင်းနှင့်မဟုတ်ပါဘူး။
ထိုအအရေးအကြီးဆုံးကတော့ - အမှားတွေလုပ်ဘူး! ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ပျက်ကွက်ခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်ဆောက်လုပ်ရေးကာလအတွင်းလွန်းမြင့်မားသည်။